I-Binance Coin (BNB): Uphawu lwendalo lotshintshiselwano olukhulu kwihlabathi lwe-crypto-iCazoo
Ikhaya » Ikhaya » I-Binance Coin (BNB): Uphawu lwendalo lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-crypto emhlabeni
tag: BEP, Binance, lwemali, Binance DEX, Isindululo seBinance Evolution, Binance Launchpad, block Chain, BNB, BNB Coin Tshisa, DEX, Launchpad, Ixabiso leStablecoin
Binance ikhokelela phambili kwimimandla emininzi. Ukongeza kulwandiso lwabo kwintengiso, bakwandisile ukuphuculwa komgaqo ngokungeniswa kwengqekembe yemveli yabo yeBinance, iBNB Binance Coin, ngoku kwezobuchwephesha ezikude nge2017.
Yintoni iBinance Coin?
Binance Coin (BNB) zizinto ezininzi. Ithokheni eluncedo esetyenziselwa ukurhweba ngeemali ezifihlakeleyo, inkqubo yophuhliso yokwenza ii -apps kunye nokukhupha amathokheni, "umvuzo" wemali okhuthaza zombini i-HODL (ebambe i-crypto ngaphandle kokuyithengisa) kwaye uyayithengisa. Ukwamkelwa komntwana ongamzalanga abe ngowakho kwi-BNB kukhula ngenqanaba elifanayo ne-Exchange uqobo.
Ngaba likho ithuba lokuba oku kukhula kuya kuncipha kwaye i-BNB iya kuba ngumqondiso wokusetyenziswa kancinci? Kule nqaku yeBinance yokuphonononga inqaku ndiza kuzama ukukufundisa ngalo. Siza kujonga kwakhona kwixabiso lexesha elide le-BNB kunye nethemba lokukhula.
Yintoni iBinance Coin (BNB)?
Indawo yeBinance blockchain
Isebenza njani iBNB?
BNB Coin Tshisa
Imbali yexabiso le-BNB
Ukurhweba kunye nokubamba (ulondolozo) lwe-BNB
Ukuphuhliswa kweBinance Chain
Izicwangciso zexa elizayo zeBinance Coin
Ngaphambi kokuba sikunike umbono wokuba yeyiphi ingqekembe yeBinance, masikhawuleze sijonge iTshintshiselwano ekhutshwe kuyo. I-Binance okwangoku lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-imali yedatha emhlabeni, kunye nomthamo wokurhweba phantse $ 1 yezigidigidi yonke imihla. Ukuba sicinga ukuba yazalwa kuphela embindini we-2017 .. nge-14 kaJulayi 2017 ukuba ichaneke. Ubhalisela iBinance simahla, kwaye ungayenza kule khonkco ukufumana Isaphulelo se20% kwiikhomishini, ngonaphakade.
Iingqekembe zeBinance (iBinance Coin) ziithokheni ezisetyenziswa kwiqonga leBinance, ke nangona zithengiswa kwintengiso kunye nexabiso lazo liyatshintsha, ngokwesiko oko umntu anokucinga ngako njengayo nayiphi na imali, njenge-Euro okanye iBitcoin. Ukusetyenziswa kwayo kubhetyebhetye kakhulu, akukho nto yenzekayo ukuba ixabiso layo liqhubeke nokunyuka.
Umthombo: IBlogance Blog
I-Binance Coin yenye yezinto ezininzi altcoin, kwaye xa yayidalwa yayisekwe kumgangatho we-ERC-20, kusetyenziswa i Inethiwekhi ye-Ethereum kunye ne-blockchain yayo. Kufuneka ikhunjulwe, kuba oko kuthetha ukuba ingqekembe nayo ilandela imigaqo ebekwe luluntu ukulawula i-Ethereum blockchain. Okubaluleke ngakumbi, nangona kunjalo, ivumela iBinance Coin ukuba izuze kwi uzinzo kunye nokhuseleko ukuba ibhloko ye-blockchain kunye ne-Ethereum ziyile ngokuhamba kwexesha. Awuyi kuba nexhala malunga neengqekembe zakho zibiwe kuhlaselo oluthile kuba zikhuselekile, zakhiwa e-Ethereum.
Yonke into itshintshile ngo-Epreli 2019, xa I-Binance ihambise i-BNB yayo i-mainnet. Ngelo xesha, baphinde batshisa i-5 yezigidi ze-ERC-20 BNB kwaye banikezela inani elilinganayo leempawu ze-BEP-2 zemveli ze-BNB kwizipaji zabo.
Emva phayaa uBinance wakhuthaza abasebenzisi bayo ukuba baguqule iithokheni ze-BNB ERC-20 zabo zibe ziithokheni zomthonyama ze-BEP-2, kodwa okwangoku uBinance usaxhasa iithokheni ze-ERC-20 kwaye abasebenzisi basenakho ukuziguqula zibe ziithokheni ze-BEP.2, nangona ingeyiyo kunokwenzeka ixesha elide ukurhoxisa amathokheni e-ERC-20.
I-Binance's Blockchain nayo iguquguqukayo: idala amathokheni amatsha ukwenza ii-asethi esele zikhona, ukuthumela, ukufumana, ukufinya okanye ukutshisa, ukumisa okanye ukuvulela amathokheni.
Unokubukela nemarike ye-DEX ukuqinisekisa ixabiso kunye nomsebenzi wentengiso yeasethi ethile, jonga imbali yokuthengiselana kunye neebhloko kwi-blockchain, ngeBinance Chain Explorer.
Ungayichazanga eyokuba ungayenza enye idatha yedatha yeBinance nge i-node API epheleleyo, Ukuphuhlisa izixhobo kunye nokusetyenziswa ukunceda abasebenzisi ukuba basebenzise iBinance Chain kunye neBinance DEX kwaye, ewe, bathumele kwaye bafumane amathokheni eBNB.
I-Binance Chain isebenzisa ingxelo eguqulweyo yesivumelwano seTendermint BFT. I-Tendermint yenzelwe ukusetyenziswa kwifayile ye- Inethiwekhi yeCosmos kwaye isebenzisa uyilo lweemodyuli ukufezekisa iinjongo ezininzi, kubandakanya ukubonelelwa kweenethiwekhi kunye namanqanaba okuvumelana ebhloko, ngokungathi liqonga apho kunokwakhiwa khona usetyenziso olwahlukeneyo.
Ezona njongo ziphambili kuyilo lweBinance Chain zezi:
Akukho kugcinwa kwemali: Abarhwebi bagcina ulawulo lwezitshixo zabo zabucala kunye nemali yabo.
Ukwenza okuphezulu: i-latency ephantsi, ukuphuma okuphezulu (eyona bandwidth ilinganisiweyo) kwisiseko esikhulu somsebenzisi kunye norhwebo oluphezulu Cwangcisa ixesha lesibini kwibloko nganye, kunye nesiqinisekiso esinye se- gqibela (isiqinisekiso sokuba intengiselwano ayinakutshintshwa).
Ixabiso eliphantsikuzo zombini iikhomishini nakwiindleko zokuhlawula amatyala.
Amava omsebenzisi alula: njengobuhlobo njengeBinance.com.
Ukuthengisa okungcono: ukunciphisa ukusebenza kwangaphambili kangangoko kunokwenzeka.
Iyavela: Kukwazi ukuphucula ukuphucuka okuqhubekayo kwetekhnoloji, uyilo kunye nemibono.
Akukho nto iphosakeleyo ngokubuza ukuba yintoni iBinance Coin, kuba ayisiyo mali. Njengomqondiso osetyenziswa kwiqonga leBinance, unenjongo ebaluleke kakhulu. Khumbula ukuba uBinance uhlawula umrhumo wentengiso kuyo yonke into oyenzayo.
Kuthekani ngokuyeka ukuhlawula umrhumo wentengiselwano? Nge-Binance Coin ungakwazi, kuba yile nto isetyenziselwa yona, ukuhlawula iikhomishini kutshintshiselwano lweBinance.
Endaweni yokuhlawula umrhumo we- $ 1 kuyo yonke i-1.000 XNUMX yeedola oyithengisayo (enokuthi idibanise kwaye ingabi sisambuku esingenakuthelekiswa nanto kubarhwebi abasebenzayo), unokusebenzisa iimali zeBinance ukumboza umrhumo. Oku kwenza ukuba iiBinance Coins zibe luncedo kakhulu kwaye zibaluleke kubarhwebi kutshintshiselwano lweBinance.
Nantsi kanye le nto isebenza ngayo: I-Binance iya kunciphisa iifizi zokurhweba kwabo banqwenela ukusebenzisa ingqekembe ye-Binance ngelixa bethengisa, kwiminyaka emihlanu yokuqala. Kwaye kukho inkqubo yekhomishini ukutyibilika isikali, ke kunyaka wokuqala unokufumana isaphulelo se-50% kwiikhomishini zakho usebenzisa iBinance Coin.
Isaphulelo kwiirhafu zokurhweba zabanini be-BNB. Umthombo: Binance
Isaphulelo siba nesiqingatha minyaka le, ke kunyaka wesibini isaphulelo siyi-25%, kunyaka wesithathu yi-12,5%, kunyaka wesine yi-6,75% kwaye kunyaka wesihlanu nonyaka ophelileyo isaphulelo siyasuswa.
Esi saphulelo sibalwa ngokuzenzekelayo kwaye sinciphiswe ukuba uneengqekembe zeBinance kwisipaji sakho sokutshintshiselana. Ukuba awufuni ukusebenzisa iingqekembe zakho zeBinance ukuhlawula iifizi, unokukhubaza ngokulula eli nqaku.
Kodwa…. kodwa ukuba isaphulelo siyaqhubeka ukwehla, ngaba umqondiso awuyi kuba naxabiso ekugqibeleni?
Njengokuba abantu abaninzi nangakumbi betsalwa kukutshintshiselana ngeBinance baya kuzisa ixabiso elingaphezulu nangaphezulu kwingqekembe, kodwa abasunguli beBinance bafumene esinye isisombululo sokuthintela ixabiso lomqondiso ekunciphiseni.
Kwikota nganye bathabatha iipesenti ezingama-20 zeenzuzo zabo kwiikhomishini kwaye bayisebenzise ukuthenga iinkozo zemali kwaye "bazitshise" okanye bazitshabalalise.
Olu Tshiso sele lwenzekile amaxesha ali-14, olokugqibela ukutsha lwenzeka nge-19 kaJanuwari, ngo-2021, kwaye yayiyeyona ndawo iphezulu eyakha yarekhodwa, apho kutshatyalaliswa iithokheni ze-BNB ezizizigidi ezi-3,6. Eyesibini ngobukhulu yayingo-Epreli 15, 2018, xa iBinance yatshisa i-2.220.314 BNB.
Ngokuthatha iingqekembe ngaphandle kokujikeleza, iBinance yenza imali eshiyekileyo ibaluleke ngakumbi. Oku kuya kuqhubeka ukwenzeka kude kube sisiqingatha sonikezelo lwemali, okanye i-100 yezigidi ze-BNB, sitshatyalalisiwe.
Ngokuhlalutya itshathi ye-BNB uyakubona ukuba ixabiso lengqekembe lonyuka ngalo lonke ixesha kutshisa (ngaphandle kwexesha lokuqala, kuba bekungaziwa ukuba kuza kuza).
UBinance ubhiyozela ukutshiswa kwesibhozo. Umthombo: IBlogance Blog
ILaunchpad sesinye isindululo esinomdla esasungulwa nguBinance kungekudala. Eli liqonga lokukhupha ithokheni kukhetho lweBinance kwi-ICO ye-Etheruem. Iya kuvumela iiprojekthi ezintsha ukuba zikhuphe amathokheni abo ngokuthe ngqo kwiLaunchpad.
Oku kubaluleke kakhulu kwi-Binance Coin (BNB) njengoko iya kusetyenziswa njengethokheni yemveli kuloo ngxaki. Njengoko ii-ICO ziye zaphakamisa i-ETH kwintengiso exhaswa yi-Ethereum, i-BNB iyakutshintshelwa ithokheni ekhutshwe yiprojekthi yokunyusa ingxowa.
Obu buchule sele busetyenzisiwe ngokufanelekileyo ngeBitTorrent Token (BTT). Ibango lalinamandla kangangokuba ukuthengisa konke kwagqitywa kungaphantsi kwemizuzu engama-20. Kwakukho nokunyuka okwangoku kwixabiso le-BNB xa kusaziwa ukuba enye iprojekthi iza kusebenzisa iLaunchpad ukukhupha iithokheni zayo: iprojekthi yeFetch.ai. Oku kukuqinisekisa kwakhona ukuba umsebenzi ojikeleze iLaunchpad unokunyusa ibango lemali ye-BNB: njengoko uninzi lwabasebenzisi belufuna ukufumana izandla zabo kwi-BNB ukuze batyale imali kwiFetch.ai, baqhubeka bethenga i-BNB ukwenza njalo.
Nangona i-Binance yindawo enkulu yokutshintshiselana, bamkele kwaye bazalisekisa isicelo sabarhwebi sotshintshiselwano olusemthethweni. Kule nkalo bazise ezabo Binance DEX.
Ukuba awukayazi okwangoku, utshintshiselwano olwabiweyo (i-DEX) lutshintshiselwano nge-imali yedatha evumela ukuthengiswa koontanga phakathi kwabathathi-nxaxheba. Akunyanzelekanga ukuba uthumele i-cryptocurrensets kwisipaji kutshintshiselwano, kwaye ubeke iiodolo.
Izibonelelo zokusebenzisa i-Binance DEX. Umthombo: Binance.org
Binance DEX yimpendulo kaBinance kulo mbuzo.
Yakhelwe ngaphezulu kweKhonkco leBinance kunye neasethi yemveli enegunya lokutshintshiselana ngokucacileyo ngumqondiso weBNB. Ezinye zezinye izinto zeBinance DEX zibandakanya ukukwazi:
khupha amathokheni amatsha
thumela amathokheni kwabanye abasebenzisi ngqo kwi-DEX
tshisa amathokheni njengoko kufuneka
freeze ezinye iithokheni kwaye uzibambe kamva
Cebisa ngababini abatsha borhwebo
Thenga iBNB KWI-DEX BINANCE
Ukususela namhlanje, ngo-Matshi 2021, i-BNB yiyo imali yedatha yesithathu inkulu ngentloko yentengiso kunye nentengo yentengiso yeedola ezingama-41,53 ezigidi. Elona xesha liphantsi le- $ 0,096109 yengqekembe yenzeke kungekudala emva kokumiliselwa kwayo ngo-Agasti 1, 2017. Elona xesha liphezulu lalisandul 'ukwenzeka, iBNB ibetha i $ 333 ngoFebruwari 20. unyaka. Akukubi kwabo bakholelwa kwimali.
Ukusebenza kwexabiso le-BNB. Bala: ingqekembe yemali
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amaxabiso e-BNB ahluka kakhulu kuninzi altcoin ngeemali zentengiso efanayo. Okokuqala kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ukutsha kwemali okuqhubekayo (ukutshisa, ukutshabalalisa) kunciphisa ukubonelelwa (ngengqondo ye ukufumaneka) ye-BNB kwintengiso. Kwaye ke ukunyuka kwemfuno ..
Ezi zinto zimbini zizizathu zokuba i-BNB ibingazinzanga kangangeminyaka kunezinye iimali. Ngapha koko, bekusoloko kungumdla weBinance ukuba ube nemali ezinzileyo yemveli oyisebenzisayo njengesibini sokurhweba. Oko bekuthethile, kutshanje bakhuphe iinguqu zabo ze-fiat solidcoins-masithethe ngeBinance USD kunye neBinance GBP solidcoins.
Siyibonile kwi-coinmarketcap: umthamo kunye nokuhlawulwa kwemali yeBinance Coin (BNB) iphezulu kakhulu. Kwangokunjalo, uninzi lwale volumu lwenzeka kwi-Binance ngokusebenzisa i-Tether (USDT) kunye ne-Bitcoin ngababini. Nangona kunjalo, i-BNB ikwadweliswa kolunye unaniselwano olunika ukubonwa kunye namaxabiso angcono, anje ngeP2PB2B, Coinsbit, MXC, njl.
Ii-BNB zigcinwa kwisipaji (isipaji) njengayo nayiphi na imali yedatha. Ngaphambili bezinokugcinwa nakweyiphi na isipaji esihambelanayo se-ERC-20, kodwa ukusukela kutshintsho lwango-Epreli 2019 oluya kwi-mainnet kunye neethokheni ze-BEP-2, ibhegi ehambelana ne-BEP-2 iyafuneka.
Ngethamsanqa, zininzi iiphothifoliyo ezixhasa i-BNB. Ukuba ufuna ukhuseleko oluphezulu unokukhetha isipaji sehardware esifana neLedger okanye iTrezor. Ukuba ukhetha isipaji esiphathwayo ungasebenzisa i-Coinomi, i-BRD, i-Trust Wallet okanye i-Atomic Wallet. I-Jaxx Liberty ikwaxhasa i-BNB, njengoko kunjalo nangesinye isipaji.
Thenga imali yengqekembe (BNB)
Ukusukela ukuba iBinance Chain yiprojekhthi yemithombo evulekileyo siyakwazi ukujonga ngqo kwindawo yokugcina ikhowudi ukufumana umbono olungileyo weeprotokholi kunye nophuhliso olwenzekayo.
Ikhowudi iyenziwa (iilog zokuhlaziya ikhowudi) yeyona barometer ilungileyo yokumisela ngokuthe ngqo ukuba ungakanani umsebenzi okwinqanaba lomgaqo-nkqubo owenziweyo. Oku kuyenziwa kwiBinance Chain kwiGitHub kule minyaka mi-3 idlulileyo.
Ikhowudi yokuzibophelela kwi-binance-chain / docs-site. Imvelaphi yeGitHub
Ijongeka ngathi yindawo esebenzayo esebenzayo.
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyiqaphele yindlela esebenzayo ngayo isiPhakamiso seBinance Evolution (BEP) esiboniswe apha ngezantsi.
I BEP Zilingana neBinance Chain elingana neZindululo zoPhuculo lweBitcoin kwaye zezinye zezinto uluntu olunqwenela ukuzibona luzalisekiswa.
Kukho amawaka ee-BEP kwihorizon ekufuneka ujonge kuyo. Ewe, i-ecosystem ebanzi ye-BNB ikwanendlela elungileyo yomgaqo wamanyathelo. Makhe sijonge ezinye zazo.
I-Binance Coin yayingaphezulu nje komqondiso osetyenzisiweyo wokuhlawula iifizi zokurhweba xa zabakho, nangona abanye bephikisa ukuba intelekelelo kwiimarike ezivulekileyo zemali yenza ukuba ibe yimali eyidijithali ngokwayo.
Oku akuyi kuhlala kunjalo, nangona kunjalo, njengeqela leBinance eliceba ukwandisa kakhulu ubungakanani bokusetyenziswa kwengqekembe ye-BNB. Siyakuthanda oku kakhulu kuthathelwa ingqalelo ukuba njengoko ixabiso le-BNB liqhubeka nokunyuka, kwaye ngenxa yokuba isiseko somsebenzisi esikhulayo seBinance sifuna ukusebenzisa ingqekembe yokugcina kwimali yokurhweba.
I-Binance Coin sele inokusetyenziselwa ukutyala imali kwii-ICOs ezibanjelwe kwiqonga le-Binance Launchpad, elinikezela abaphathi be-BNB indlela yokwenza imbuyekezo kwiingqekembe zabo. Ezi ICO zibandakanye isonka, iBitTorrent, i-Elrond, i-WINk, iKava, kunye nezinye iiprojekthi ze-blockchain. Utyalo-mali lweBinance Launchpad's BNB lube yimpumelelo ukuza kuthi ga ngoku, enika ithokheni ye-BNB ithuba elongeziweyo.
Iiprojekthi ezisebenzisa iBinance Coin
Ngokwalo mgaqo, njengoko uninzi lweemarike ezisasazekayo zivuma ukuthengisa iingqekembe ezintsha, uya kuthi ubone ukonyuka kwemfuno ye-BNB ukuze ibanike amandla.
Okwangoku, ezinye izinto ze-BNB zihlawula iindleko zokuhamba kunye nabarhwebi abakhethiweyo e-Australia, behlawula ityala le-Crypto.com lekhadi letyala, bethenga izipho ezibonakalayo kwiqonga laseMithril, behlawula nantoni na kwiivenkile abazisebenzisayo. Inkqubo ye-XPOS PundiX kunye nenani Olunye usetyenziso. Kuyinyani, uninzi lwezi zibotshelelwe kwiqonga ngalinye, kodwa njengoko ukusetyenziswa kusanda, i-ecosystem ye-BNB iya kuqhubeka nokukhula.
Njengoko i-Binance iyaqhubeka nokukhula kwaye yongeza amanqaku amatsha, phantse ngokuqinisekileyo ukuba inani lezinto ezinokwenziwa ngeemali zeBinance ziya kwanda.
Ayifanele ilibale ukuba sele kunokwenzeka ukuba urhwebe nge-BNB njengesiqhushumbisi, uzama ukungena ngexabiso eliphantsi emva koko uthengise umqondiso ngexabiso eliphezulu, kanye njengokuba abaninzi besele besenza! Nabani na oqale kwithuba elidlulileyo ngokuqinisekileyo ubonile imali eninzi. Qaphela ukuba ungene ngoku isiqwenga side kakhulu.
Akukho nto iyiphikayo into yokuba ikamva le-Binance ingqekembe inxulumene ngokusondeleyo nokusebenza kweBinance kwifom yayo yoTshintshiselwano. Ngelixa u-Binance ethe chu ukuphelisa intlawulo yesaphulelo ngokusebenzisa i-Binance Coin, ikwafumana ezinye iindlela zokwenza ingqekembe ibaluleke nangakumbi.
Njengokutsha, ukutshisa, ukutshabalalisa unikezelo lweengqekembe kunye nokwenza i-Ulawulo oluMiselweyo olusebenzisa imali yeBinance njengemali yayo yemveli. Ukusetyenziswa kwexesha elizayo kwee-BNB kuyakwenza ukuba ibe luncedo ngakumbi kwaye kuqhutshwe ibango kwimali.
Ewe kunjalo, ukubakho kokunyuka kwexabiso kwingqekembe yeBinance kuxhomekeke kwimpumelelo yeBinance njengoTshintshiselwano. I-Binance ayiphumeleli impumelelo, iyayidibanisa.
Inqaku langaphambiliUkurhweba kweMargin (nge-LEVA) kwenziwa njani kwi-Binance?
Inqaku elilandelayoIsaphulelo kwimirhumo yeBinance